Iikholeji zase-Illinois: I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa
Ukuqhathaniswa kwamacala ohlangothini lwe-SAT ye-Admissions kwiiKholeji zase-Illinois
Ziziphi iimpawu ze-SAT ozifunayo ukuze ungene kwelinye leekholeji zase-Illinois kunye neeyunivesithi eziphezulu? Itheyibhile elandeleleneyo ngokubhekisele kwicala elingezantsi ibonisa izikolo ze-SAT eziphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye leekholeji eziphezulu e-Illinois .
Iikholeji ze-Illinois I-SAT Score Ukuthelekiswa (phakathi kwama-50%)
IAgasana College Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa ubone igrafu
University of DePaul - - - - - - ubone igrafu
Illinois College - - - - - - ubone igrafu
IIT 510 640 620 720 - - ubone igrafu
Illinois Wesleyan 510 640 620 760 - - ubone igrafu
Knox College Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa ubone igrafu
Ihlathi leLwandle - - - - - - ubone igrafu
University of Loyola 520 630 510 630 - - ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseNyakatho ntshona 690 760 710 800 - - ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseChicago 720 800 730 800 - - ubone igrafu
UIUC 580 690 705 790 - - ubone igrafu
College College 590 710 580 690 - - ubone igrafu
Kweminye iikholeji zase- Illinois, khetha isikolo kwiphepha lam elikhulu yeeprofayili zokungeniswa kweekholeji . Kwakhona, khumbula ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avunyelwe kule iikholeji zase-Illinois aya kufuna ukufumana irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi yentsingiselo yenkcazo kunye neencwadi ezilungileyo zokuncoma . Uya kuphawula ukuba ezinye iikholeji azifunanga izikolo ze-SAT kuwo onke.
Cofa kwi "jonga igrafu" idibanisa ngakwesokudla kwimiqolo nganye ukuze ufumane umboniso wendlela abanye abafake izicelo abaye bazenza ngayo kwezi zikolo. Kukho, unokufumanisa ukuba umfundi onamazinga angaphantsi okuvavanya avunyelwe esikolweni, okanye ukuba umfundi onamanqaku aphezulu anqatshelwe. Ekubeni ezininzi zezikolo zivunyelwene ngokubanzi, amanqaku ayingxenye enye yesicelo. Qinisekisa ukuba zonke izicelo zakho zomeleleyo, kwaye ungathembeli kumanqaku akho okuvavanya ukuba uhambe nawe.
Ukuba amanqaku akho aphantsi kunokuba uyathanda, kwaye unayo ixesha elaneleyo, unako ukufumana i-SAT.
Ngamanye amaxesha isikolo siya kukuvumela ukuba uhambise amanqaku akho okuqala kunye nawe, kwaye ungaphinda uhambise i-newer yakho, amanqaku aphezulu kamva.
Ukuba unomdla ekuboneni iprofayili yeyiphi na yezi zikolo, nqakraza nje amagama abo kwitafile ngasentla. Kulapho, uya kufumana ulwazi olunceda abafundi abaza kuba ngabavakalisi, ubhaliso, uncedo lwezemali, iimbasa ezidumileyo, iimbaleko kunye nokunye!
Ukuze ufunde kabanzi malunga nezikolo ze-SAT zeentlobo ezahlukeneyo zeekholeji, khangela la manqaku:
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiikholeji zeNew Jersey zonyaka oneminyaka emine
I-WEBER Igama lomxholo kunye neNtsapho yeMbali
Inkomo okanye BS: Diggy vs. J. Cole
UbuBuddha: 11 Ukungavisisani okuqhelekileyo kunye neempazamo
I-Classic Rock 101: Enye uhlobo, Iinkcazo ezininzi
Iimpawu zamaKristu zamahhala
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo Imali?
Izizathu zeRussian Revolution Part 2
UVAVANYO LWESIKHOKELO SEBakala 7-12
UGerald Gardner & Gardnerian Wicca